Iindaba -Wazi kangakanani malunga noMnyango oZenzekelayo weHermetic?
Wazi ntoni malunga noMnyango oZenzekelayo weHermetic?
Uhlobo loMnyango oZenzekelayo weHermetic. Ngokubeka isixhobo sokutywina kumazantsi egqabi lomnyango, xa igqabi lomnyango kunye nesakhelo somnyango sivaliwe saza savalwa, intonga eshukumayo yesixhobo sokutywina unxibelelana kwaye icudisa isakhelo somnyango, isiya kwisixhobo sokutywina, kwaye icinezele Intwasahlobo edibene nentonga ehambayo ngaxeshanye. Umkhono wokutywina utsalwe ngentambo usiya ezantsi ngenxa yomxhuzulane ukuze ulingane nomhlaba wokutywina, ukufudumeza ubushushu kunye nokuthintela ukungangeni manzi.
Umnyango oZenzekelayo weHermetic ubandakanya igqabi lomnyango, isakhelo somnyango, kunye nesixhobo sokutywina. Igqabi lomnyango liqhagamshelwe kwisakhelo somnyango ngehenjisi. Isixhobo sokutywina siqhagamshelwe ngokuchanekileyo kwisiphelo esisezantsi segqabi lomnyango. Intambo iqhagamshelwe kumphezulu wangaphakathi wentonga ehambayo. Intambo idlula ngokubhabha enomngxunya ongqukuva kwaye idityaniswe nomkhono wokutywina. Ukuhamba ngasekhohlo nangasekunene kwentonga ehambayo kuqhuba umkhono wokutywina ukuya phezulu nasezantsi ngentambo. Ukudideka kulungiswe ngaphakathi ngaphakathi kwesakhelo. , Intonga ehambayo igqunywe ngentwasahlobo, icala elinye lentwasahlobo lixhumene ngokuthe ngqo nentonga ehambayo, kwaye elinye icala lentwasahlobo lixhumeke ngokuthe ngqo kunye nokudideka. Yiya ezantsi ukuze ulingane emhlabeni. Xa kuvulwa igqabi lomnyango, intonga eshukumayo iyaphuma, kwaye intambo itsalela umkhono wokutywina phezulu kwaye kude nomhlaba.
Intambo inxulunyaniswe nomkhono wokutywina ojikeleze ipleyley ethile, kwaye zombini iziphelo ze-pulley shaft ezinzileyo zilungelelaniswe kwicala elingaphakathi lesakhelo. Intonga ehambisekayo intambo yoxande ende kwicandelo eliphambeneyo, kwaye umphezulu wangaphandle wentonga ehambayo yindawo egobileyo. Isiphelo esisezantsi somzimba wesakhelo sikwanikezelwa ngengoma, kwaye umkhono wokutywina unokuhamba uye ezantsi ecaleni kwendlela. Umphezulu wokuphela komphezulu womzimba wesakhelo usuka kwisahlulo esibandakanyekayo, kwaye uyabandakanyeka kwaye uqhagamshelwe ngokuqinileyo kunye nomphetho ongezantsi wephepha lomnyango. Umzimba wesakhelo kunye negqabi lomnyango lenziwe ngokudibeneyo. Umkhono wokutywina ubumbeke ngoku-U kwaye umile. Umkhono wokutywina wenziwe ngezinto zepolymer. Umkhono wokutywina yimveliso yerabha. Icala elisecaleni lesakhelo somnyango lisondele emhlabeni, kwaye icwecwe lesinyithi lilungisiwe, kwaye iphepha lesinyithi lixhumeke ngokuthe ngqo kwisakhelo somnyango ngezikere.
Ixesha Post: Jun-05-2021